Ihe akpịrị na mpaghara ikpu: otu esi tufuo ha - SANTE PLUS MAG - TELES Relay
Ihe akpịrị na mpaghara ikpu: otu esi tufuo ha - SANTE PLUS MAG
By TELES RELAY	 On June 3, 2021
Kọwara ya Elizabeth boskey, ọkachamara na ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ, ihe kpatara ọdịdị pịmpụl na ikpu nwere ike isi n'ọtụtụ ihe. Nsogbu ndị a nwere ike ịghọ ezigbo ogige ma ọ bụrụ na anyị anaghị agwọ ha ma ọ bụrụ na anyị aghọtaghị ihe na-akpata ha.
Gini bu ihe nkpuru aru?
Ihe akpịrị nwere ike ịpụta n'ọnụ ụzọ nke ikpu na n'ime, ọkachasị na mkpịsị ụkwụ, akụkụ a na-ahụ anya nke akụkụ ahụ. Akụkụ a dị n'akụkụ akụkụ ahụ nke ụmụ nwanyị dịka ọwa mmiri dị n'ime nwere ike ịnwe rashes ndị a nwere ike na-egbu mgbu. Oge ụfọdụ ndị a bụ nsonazụ ezughi oke nke, na mkpokọta nje na ọsụsọ, nwere ike ịbanye na pores. Ihe akpịrị nwere ike ịmalite dị ka akụkụ ọ bụla nke ahụ n'ihi usoro ọgwụgwọ a. Agbanyeghị, uto ndị ọzọ nwere ike ịpụta na vulva ma ọ bụ ikpu n'ihi ọtụtụ ihe gụnyere ndị na-ebute ọrịa. Ha nwere ike buru ụdị ihe otutu ma choro ndenye ọgwụ nke dọkịta.
Ọrịa ụmụ nwanyị. Isi mmalite: Doctissimo
Kedu ihe kpatara akpịrị akpịrị na ikpu?
Isi ihe na-eme ka ọdịdị pịmpụl pụta na gburugburu ikpu bụ ikpuchi ihu nke pores. Nsogbu hormonal nwere ike ịbụ ihe kpatara ya mana ọ nwekwara ike ịpụta site na ihe kpatara ya. Ọ bụ ezie na adịghị ọcha dị ka ịgbanwe uwe nwanyị na-adịghị agbanwe agbanwe nwere ike ime ka rashes ndị a na-eto ngwa ngwa, ngwa ngwa mmanu na mmiri ndị ọzọ dị ka ọpụpụ ọcha nwekwara ike ịkpata ha. Uto ndị a dị ka pịmpụl niile na ahụ bụ obere ntụpọ uhie na-acha ọcha, nke nwere ọchịchịrị ma ọ bụ ọbara ọbara. Ndị ọzọ nwere ike jupụta na nsị ma kpatara nnukwu mgbu. Otú ọ dị, nke ikpeazụ abụghị nkwa nke ịdị njọ nke ọnọdụ gynecological. Mgbe ụfọdụ, nsogbu ndị a dị n'ọrịa ụmụ nwanyị nwere ike ịbụ ihe butere ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ nke ahụ nwere ike gbasaa na ndị ọzọ na-enweghị nlekọta ahụike tupu oge ahụ. Ha bụ ihe mgbaàmà nke ọnọdụ ndị ọzọ. Ọ bụ nke a kpatara na ọdịdị ha ga-achọ ka gị na dọkịta ọkachamara gbaa izu iji gbochie nlọghachi ma gwọọ ọrịa ahụ gbagoo.
Kedu ihe na-akpata ọdịdị ntutu ntutu na-adịghị ike?
Otu n'ime oké ihe ndị a akpụkpọ growths na ikpu bụkwa àgwà anyị na-ịmụta. N'ime ha, ịme waksị na ịkpụ ntutu bikini. Nke a ọmụmụ gosipụtara na ụzọ ndị a na-ebute ntutu isi na 32,7% nke ụmụ nwanyị n'oge ụfọdụ na ndụ ha. Iji gosipụta, follicle, oghere ebe ntutu isi ga-agbadata. Nke ikpeazu na-apụta na akpụkpọ ahụ -abụ ozu nke na-ebute mbufụt, papules, hyperpigmentation, na pustules itchy. Ndị nwere ntutu gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụ na-agagharị agagharị na-ewekarị ọrịa ndị a na-enweghị ntutu. Iji merie nsogbu a, ị ga-akwụsị ozugbo na mbụ iji belata nkasi obi. Ọ bụrụ na ntutu a na-atụghị apụ n'anya, a na-atụ aro ka ị gakwuru onye ọkachamara n'ọrịa ụmụ nwanyị ma ọ bụ ọkà n'ọrịa akpụkpọ anụ nke ga-agwa ọgwụgwọ iji gwọọ mbufụt ahụ ma gbochie oke nje nje. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịmeghachi ngwa ngwa, ọ bụ n'ihi na ahụ ndị a si mba ọzọ na anụ ahụ nwere ike ịlaghachi ma ghọọ folliculitis, nke bụ nrịanrịa nke ntutu isi. Ọ bụghị naanị ịkpụ afụ ọnụ ugboro ugboro na-akpata ọrịa a na-arịa ọrịa dermatology. Ọ nwere ike ịpụta dị ka nsonye nke iyi akwa na ọsụsọ siri ike.
Kedu ihe bụ vulvar cyst?
Dị ka ihe otutu, akpịrị nwere ike ịmalite n'akụkụ ahụ ọ bụla, gụnyere ihu. Uto a bu akpa ndi juputara na mmiri nke na adighi nma ma ha nwekwara ike buru oria na nke bu ihe mbu, ya mere odi nkpa ka ndi okachamara nyochaa ha. 2% nke ụmụ nwanyị na-azụlite gland Bartholin gysts ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ ha, nke na-etolite n'akụkụ ọ bụla nke egbugbere ọnụ ma dị mma. Ha na-esite na mgbochi nke eponymous gland, na-ahụ maka mmekọahụ lubrication ma ọ bụ ọrịa na nje E.coli. Uto nke cysts ndị a na-adị nwayọ nwayọ ma ha anaghị enwe ụfụ ma sie ike ịhụ maka ọtụtụ afọ. Ihe mgbaàmà kachasị? Obere ahụ erughị ala mgbe urinating. Iji gwọọ ha, onye ọkachamara nwere ike inye ọgwụ mgbochi mgbe ha dị nro. Ọ bụrụ na ha siri ike karị, onye ọkachamara nwere ike ịrụ ọrụ drainage nke ịwa ahụ ma ọ bụ wepụ ya kpamkpam iji gbochie nlọghachi. Mkpụrụ ogwu ndị ọzọ na-abụghị nke nwere ike ịpụta na mkpịsị ahụ dịka milia, epidermoid cyst, lipoma ma ọ bụ pyogenic granuloma, na-abụkarị ihe kpatara ọbara ọgbụgba. Nsogbu ndị ọzọ gynecological nwere ike imetụta ikpu ma pụta n'ihi mmerụ ahụ mmamiri n'oge ịwa ahụ, ụbụrụ na-abụghị nke cancer na akwa ahụ, ma ọ bụ gland egbochi. Ọ bụ ezie na nsogbu a nwere ike imetụta ihe ruru 2% nke ụmụ nwanyị, anaghị achọpụta ihe kpatara ya mgbe ụfọdụ. 10% nke ihe ojoo na-adighi nma bu ihe ndi ozo nke Gartner, nke putara n'oge amuru ya, nke ndi dibia bekee na achoputara. E nwere ndị ọzọ benign cysts nke ikpu dị ka ahu otutu nke Müller ma ọ bụ Nsonye cyst. Nke ikpeazu na-egosi n’azu mgbidi aja, enwere ike ịwa ahụ ma ọ bụ ịmụ nwa. Ọnọdụ ndị a niile enweghị mgbu, ha pere mpe, ha anaghị achọ ọgwụgwọ. Mgbe achọpụtara oghere a, onye ọkachamara nwere ike ịtụ ultrasound, MRI ma ọ bụ biopsy iji guzobe nchoputa ma chịkwaa ọrịa kansa ya. Mgbe ọ na-abawanye ma na-akpata mbufụt, onye ọkà n'ọrịa ụmụ nwanyị nwere ike ikpebi na mwepu iji zere ịmaliteghachi. Kpachara anya, a ghaghi kpopu ahihia n'onwe ya n'ihi na nke a nwere ike ibute oria.
Kedu ihe bụ Molluscum contagiosum?
Ọ bụ ezie na cysts bụ otu n’ime ihe ndị nwere ike ịkpata pịmpụl na ikpu, molluscum contagiosum bụkwa ọrụ maka rashes ndị a na membran mucous. Nsogbu a bụ ọrịa nje na-akpata otu ma ọ bụ ọtụtụ obere papules ịpụta, nke nwere ike ịkpata mgbakasị. Ndị a siri ike na pink, ọcha, ma ọ bụ anụ ahụ dimple. Ọ bụ ọrịa nwere ike ibunye site na mmekọahụ mana ọ na-emetụtakarị ụmụaka, ndị mmadụ nwere usoro mgbochi ọgụ na ndị okenye na-enwe mmekọahụ. Ọgwụgwọ dị iji mee ka ha pụọ ​​n'ime ọnwa itoolu ma ha abịa n'ọtụtụ nhọrọ. Cryotherapy, usoro a na-ewere dị ka ihe doro anya, enweghị nsogbu ọ bụla ebe ọ bụ na usoro a nwere ike ibute ọnya, ọnya ma ọ bụ ọbụna hyperpigmentation. Curettage abughi ihe ojoo ma wepu ahihia ndia n'emeghi aru. Ndị ọzọ ọgwụgwọ nke cutaneous ngwa, immunomodulators na antivirals nwere ike na-atụ aro na-emeso a ọrịa.
Kedu ihe bụ veinos veins?
Ntughari ndị a na-adịgide adịgide nke akwara ụkwụ na ụkwụ aka nwere ike ime na vulva ma bụrụ ihe kpatara ọnya nke akpụkpọ anụ mucous. Nke a na-eme na ihe ruru 22% nke ụmụ nwanyị dị ime. Ihe kpatara ya ? Mkpokọta ọbara na akwara vulvar nke bụ ebe a na-azụlite maka njupụta nke na-etolite na elu nke egbugbere ọnụ. A na - enwekarị nsogbu banyere nsogbu ụmụ nwanyị ndị a na nsogbu nke Bartholin n'ihi ọdịdị ha siri ike. Ọ bụ ezie na veins ndị a nwere ike bụrụ ndị nwere nsogbu, ha nwere ike igosipụta nrụgide na mkpịsị ahụ, ike ọgwụgwụ, mgbu, ọkụ, na itching na mpaghara a dị nro. Ime afọ bụ oge dị mma maka veins a ka ọ na - apụta, ha na - ebelata kwa izu isii mgbe ha mụsịrị nwa. Ọ bụrụ na ha anọgideghị na ya, a ga-agwọ ha ahụ ma ọ bụ site na ịmalite imebi ihe. Sclerotherapy bụ ihe ọzọ na-adabere na ntụtụ n'ime akwara gbasaa iji mechie ya ma nyefee ọbara na arịa ndị ọzọ.
Ihe mgbu na ikpu. Isi mmalite: Cliff Booth
Gini bu oria nwoke?
Site na papillomavirus mmadụ (HPV), ọrịa na-ebute site na mmekọahụ nke nwere ma ọ dịkarịa ala ụdị 100, waatị na vulva nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ bụrụ ihe mgbaàmà nke ọrịa cancer akpa nwa. Ọrịa a nwere ike igosipụta waatị nke nwere ike ịdị larịị ma ọ bụ bulie elu. Agba ha dị iche ma nwee ike ịdị iche site na odo, odo odo ma ọ bụ ọbụna aja aja na ọnụ ọgụgụ ha dịkwa iche dabere na onye ọrịa ahụ. Itching na ọbara ọgbụgba site na uto ndị a nwere ike iso mmetọ. Ọtụtụ usoro ọgwụgwọ dị adị dị ka cryotherapy [ihe editọ: usoro ọgwụgwọ oyi], ntinye obodo, nchịkwa nke antimitotics iji mesoo nlọghachi n’enwepụghị nje ahụ kpam kpam.
Kedu ihe kpatara ọrịa herpes genital?
Ọrịa a na-ebute site na mmekọahụ jikọtara na nnyefe nke herpes simplex virus (HSV) nke dị n'ụdị abụọ metụtara 47,8% nke ndị America dị afọ 14 ruo 49 na 2016. Ọ nweghị ọgwụgwọ a ka ga-agwọta ọrịa a nke na-agbasa site na mmekọahụ na ọkachasị. na-emetụta ụmụ nwanyị. Pesdị 1 ụdị herpes simplex nwere ike gbasaa site na ọnụ ọnụ ma ọ bụ n'oge mmekọahụ ọnụ. Pesdị 2 ụdị herpes simplex nwere ike bute ya mgbe ọ banyechara a na-ahụkwa ya dị ka ọdịdị nro dị ka nke ọnya oyi na-agba na mkpịsị, n'ime ikpu ma ọ bụ cervix. Ihe ndị a na-ejupụta na mmiri mmiri, ha nwere ike ịpịa ya na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ na-acha odo odo. Mgbe ụfọdụ ọrịa a na-arịa ọrịa gynecology bụ ọrịa na-enweghị nsogbu ma nwee ike gbasaa na-enweghị otu n'ime ndị mmekọ maara ya. Ihe kpatara HSV ji enye ahụ ike bụ na ọnọdụ ahụ na-esonyere mgbu, itching, na ọkụ n'oge urination. Ọrịa venereal a na-enwekarị mgbagwoju anya site na ndị dọkịta dịka ọrịa urinary tract ma ọ bụ ọrịa mkpịsị pelvic. Ihe mgbaàmà a na-echekarị tupu mmalite nke herpes simplex bụ isi ọwụwa, malaise ma ọ bụ ahụ ọkụ. Ọ bụrụ na blisters ma ọ bụ ihe ịrịba ama ndị a dị, ọ na-atụ aro ka a ọbara ule genital herpes. Ekwesịrị ịme nyocha ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị nwere ọrịa a na-ebute site ná mmekọahụ.
Kedu ihe bụ ọrịa Fox-Fordyce?
Ọrịa a na-adịghị ahụkebe bụ maka mbufụt na-adịghị ala ala nke apocrine sweat glands, nke dị na ntutu dị ukwuu dị ka ọkpọ, nipples ma ọ bụ armpits. Ihe omuma a bu ihe nke ikpe azu na odidi nke otutu papules nke puru ime ka itching. Oria ndị a na-apụtakarị n'egbugbere ọnụ ma dị obere, sie ike, na anụ ahụ. Ọkọ nke na-eso ha nwere ike ịkpata nke abụọ ọrịa nke ntutu isi. Ọrịa a kachasị emetụta ụmụ nwanyị (90%) na ihe kpatara ya bụ ndị nchọpụta na-amatabeghị na-atụ aro na homonụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike ịkpata. A na-eji ọgwụgwọ dị iche iche agwọ ọrịa a, dị ka ọgwụgwọ corticosteroid na-egbu egbu, retinoids ọnụ ma ọ bụ nkwụsị nke gland apocrine mepụtara ọrịa Fox-Fordyce.
Gịnị bụ mmamiri polyps?
Vapinal polyps bụ ihe na-abaghị uru, nke yiri wart nke na-apụta n'akụkụ mpaghara ahụ ma nwee ike bụrụ ihe ọjọọ na ụmụ nwanyị postmenopausal. Ọkara nke ụmụ nwanyị nwere ike ịzụlite polyps ndị a na akpanwa na karịsịa na endometrium. Mkpado anụ ahụ na-egosikwa na cervix ma na-adịkarịghị na ikpu. Otutu ihe nwere ike ime ka ha bia dika ọrịa shuga, oke ibu, ọbara mgbali elu, afọ ma ọ bụ mgbanwe na steroid nwoke na nwanyị. Iji chọpụta polyp, ọkachamara ga-arụ ultrasound ma ọ bụ hysteroscopy. Nke ikpeazụ nwere ike ịbụ odo odo, isi awọ, ọcha ma ọ bụ ọbara ọbara na obere ma buru ibu. Otu n’ime ihe mgbaàmà ndị ahụ enwere ike ịchọpụta: ọbara ọgbụgba n’agbata oge a na-akpọ ntụpọ, ma ọ bụ nupụta ọbara nke na-eme ma nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ. Otutu ihe nwere ike ibute site na polyp endometrium dika enweghi ike. Naanị, mgbe nke ikpeazụ ahụ wepụrụ site na ọkachamara n'ọrịa ụmụ nwanyị, ụmụ nwanyị nwere ike ịmụba. Iji wepu mkpado a, ọkachamara ahụ nwere ike ịme mwepụ ịwa ahụ ma ọ bụ ịwa ahụ hysteroscopic mgbe ọ buru ibu ma ọ bụ nwee ike ịrịa ọrịa. Mgbe nke ikpeazụ dị obere, ọ nwere ike iji nitrogen mmiri mmiri. Chọọ nlekọta ahụike mgbe pịmpụl na-egbu mgbu, na-enye aka, ma na-ezobe mmiri. Dọkịta nwere ike inye gị nyocha makaọrịa na-ebute site ná mmekọahụ tupu ikwenye nsogbu ahụ.
Kedu ọgwụgwọ maka etuto na ikpu?
Ihe puru iche nke akpụkpọ anụ mucous bụ na ha na-emebi emebi ma chọọ nlekọta pụrụ iche site na ndị ọkachamara. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nsogbu ụmụ nwanyị nwere ike ịgụnye ịgwọ ọgwụgwọ anụ ahụ, ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ọgbụgba ma ọ bụ ịwa ahụ. N'ime ọgwụgwọ ndị dọkịta na-enye, a na-atụ aro ọgwụ nje iji gwọọ ntutu isi, Fordyce tụrụ, na ọgwụ mgbochi Bartholin gland. Enwere ike ide ọgwụ mgbochi ime n'ihi na ntụpọ Fordys mgbe a na-egosipụta ude mmiri imiquimod maka akụkụ herpes, papillomavirus waatị ma ọ bụ molluscum contagiosum. A na-eji ọgwụ nje eme ihe maka ịgwọ ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ dị ka herpes genital ma ọ bụ papillomavirus.
Olee otú ndammana kwụsị nkasi obi nke ọrịa ndị a?
Na-emeso ihe mgbaàmà ndị a na-enye nsogbu mgbe niile, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ onye ọkachamara. Ngwọta anụ ahụ nwere ike inye aka belata ihe mgbu a, ọkachasị maka akpịrị ma ọ bụ ajị ntutu. Iji belata ha, a na-atụ aro compresses na-ekpo ọkụ. Mgbe usoro ọgwụgwọ na-efe efe, a na-atụ aro ka ị jiri akwa nhicha dị ọcha oge ọ bụla. A na-egosi oyi iji gwọọ veins n'ihi na ọ na-egbochi dilation nke akwara akwara nke ọrịa gynecological. Omume a bara uru maka ọrịa Fox-Fordyce. Ọ dị mkpa iji kpoo anụ ahụ ka emechara ka ọ ghara imepụta iru mmiri na-enye aka na nje bacteria. Kpachara anya, a gaghị etinye ude maka etuto ahụ na ikpu n'ihi na akpụkpọ anụ mucous na-ewekarị iwe na ọkụ.
Ọrịa ụmụ nwanyị. Isi Iyi: Ebe njedebe Santé
Kedu otu esi egbochi etuto dị ọcha?
Iji zere ọrịa ndị a, ọ dị mkpa ịnwe ụfọdụ omume na-egbochi nsogbu gynecological. Ndị a metụtara ịdị ọcha kachasị mkpa na iwu ndị a ga-etinyere kwa ụbọchị. Gba uwe ime nke sara mbara, ezigbo ịdị ọcha na ịdị ọcha zuru oke, na ngbanwe nke ịdị ọcha mgbe niile bụ akụkụ nke a. Ọ bụrụ na ntutu na-adịkarị gị mfe, a na-atụ aro ka ị belata ntutu ntutu gị karịa ịkpụ afụ ọnụ. Ọ bụrụ n’ịchọpụta ọdịdị etuto dị na akụkụ ahụ gị, ọ nwere ike bụrụ n’ihi iji ncha ma obu ihe ojoo nke nwere ike ịkpasu iwe. Iji gbochie ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ, ọ dị mkpa iji condom ma nwalee ma ọ bụrụ na ị gbanwee ndị mmekọ. Ọ bụrụ na ị nwere herpes genital, jiri ya mee ihe iji gbochie iwe gị. Dọkịta nwere ike iduzi gị ka ị ga-esi nwee mmekọahụ na-adịghị ize ndụ. N'ihu ihe mgbaàmà ọ bụla, ọ ga-adị mma ka ị gakwuru onye ọkachamara ahụike ma ị na-enwe mmekọahụ.
Ọ ga - ekwe omume ibi na ọrịa a na - ebute site na mmekọahụ?
Dị ka Erslọ Ọrụ nke Nchịkwa Ọrịa, ma ọ dịkarịa ala otu n'ime mmadụ 6 na-ebi herpes ebe ọtụtụ nde mmadụ kwenyere na ha butere mmadụ papillomavirus. Otú ọ dị, ọrịa ndị a abụghị ihe a na-apụghị izere ezere n'ihi na ọ ga-ekwe omume inwe ndụ mmekọahụ na-enye afọ ojuju na ezigbo usoro ọgwụgwọ. N'okwu ndị a, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ ọkà n'akparamàgwà mmadụ mgbe ọrịa a na-emetụta obi ike onwe onye. N'iji uzo na onye ozo na eme ihe ndia dikwa nkpa ka odi nkpa ighota mmeko nke mmeko nwoke na nwanyi.
Ihe etuto dị na mpaghara ahụ dị njọ?
Ogwu ndị a nwere ike mgbe ụfọdụ yiri pịmpụl anyị nwere n'ahụ, nke na-apụta maka ebumnuche homonụ ma ọ bụ n'oge ntutu na-adịghị mma. Ọ nwekwara ike metụtara esemokwu, ikpughe na allergens, kpachie pores ma ọ bụ naanị iwe anụahụ.
Kedu esi tufuo pim na egbugbere ọnụ?
Ọrịa ndị a nwere ike na-egbu mgbu ma na-ebute mgbakasị ma ọ bụ ọkọ. Ọ bụrụ na pịmpụl ndị a dị nwayọọ, itinye nhicha dị ọcha, na-ekpo ọkụ kwa ụbọchị kwesịrị inye aka. Ọ bụrụ na ọgwụgwọ ndị a anaghị eme ka ahụ erughị ala a, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ onye ọkachamara.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/boutons-dans-la-region-vaginale-comment-les-elimin/
France kwụsịtụrụ ọrụ agha ya na Mali - Jeune Afrique